Kivy tanteraka ny Ceni: tsy hahazo alalana intsony ny mpanara-maso tsy manao tatitra - ewa.mg
Kivy tanteraka ny Ceni: tsy hahazo alalana intsony ny mpanara-maso tsy manao tatitra
News - Kivy tanteraka ny Ceni: tsy hahazo alalana intsony ny mpanara-maso tsy manao tatitra
“Raha tsy miroso amin’ny fanaraha-dalàna isika, hisy ny fepetra horaisin’ny Ceni: ny tsy fanomezana intsony ny alalana sy fankatoavana an’ireo fikambanana na malagasy na iraisam-pirenena ny fanaraha-maso ny fifidianana, izay tsy nahatonga tatitra amin’ny fotoana ara-dalàna aty amin’ny Ceni momba ny fanaovany ny fanaraha-maso ny fifidianana.” hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia, ny faran’ny herinandro teo. Tapitra ny 6 jona ny folo andro voalazan’ny lalàna, tsy maintsy anateran’ny mpanara-maso fifidianana nahazo fankatoavan’ny Ceni amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana depiote teo. Efatra amin’ireo fikambanana malagasy sy iraisam-pirenena miisa 39 nahazo fankatoavana sy alalana tamin’izany no mba nahatonga tatitra, ny herinandro teo. Noho izany, manao antso fanairana ireo mpanara-maso fifidianana ireo hanara-dalàna ny Ceni.
Ilaina ny fanaovana tatitra
Antony tena ilàna ny fanaovana ny tatitra ataon’ny fikambanana manara-maso ny fifidianana aty amin’ny Ceni ny fanarahan-dalàna. Voalazan’ny lalàna fa folo andro aorian’ny andro fandatsaham-bato ny tokony handefasan’ireo mpanara-maso nahazo alalana sy fankatoavana ny tatitra ny fanaraha-maso ny fifidianana nataony any amin’ny Ceni. Tsy maintsy manao tatitra ny Ceni isaky ny mahatontosa fifidianana ka hilazany ny tokony ho fanatsarana ny fifidianana manaraka. Noho izany, ilaina ny tatitr’ireo mpanara-maso, hahitana ny mety hotohizana sy hohatsaraina tamin’ny fifidianana. Hahitana ny tsy mety tokony hovaina sy hitadiavana hevitra tsy hiverenany intsony amin’ny ho avy.
L’article Kivy tanteraka ny Ceni: tsy hahazo alalana intsony ny mpanara-maso tsy manao tatitra a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 11/06/2019
Rugby aty Afrika: federasiona 11 hahazo vola 276 490 euros
Mba hampirindra tsara ny fanombohan’ny taom-pilalaovana 2021, taranja rugby, nanapa-kevitra ny Rugby Afrique fa hanampy ireo federasiona 11 ka hanolotra vola ho azy ireo tsirairay avy.Ho fiomanana amin’ny fiverenana amin’ny fifaninanana sy ho fiatrehana ny taom-pilalaovana 2021, nanambara ny Rugby Afrique fa hanome vola mitentina 276 490 euros na 663 576 000 Ar, ho an’ireo federasiona mpikambana eo aminy. Hatreto, firenena 11 amin’ireo 39 ny hisitraka izany: Namibia, Kenya, Oganda, Tonizia, Zimbaboe, Alzeria, Zambia, Madagasikara, Côte d’Ivoire, Sénégal ary Ghana.Nisy ny masontsivana henjana nojerena ahafahana mizara ireo vola ireo ka anisan’ireny ny nampiasana ny fanampiana tamin’ny taon-dasa. Tokony ho natokana ho an’ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny fifaninanam-pirenena sy ny fanampiana ny ligy ary ny klioba ny 40 %. Ny 60 % kosa, nifototra tamin’ireo vokatra sy ny fandraisana anjara tamin’ny fihaonana natao ny 2018 sy ny 2019 ka anisan’ireny ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can), lahy sy vavy, ny rugby lalaovina olona fito sy ny “Barthès Trophy U20”.Tsaraina amin’ny zava-bitaHiankina amin’ny zava-bitan’ny ekipam-pirenena izany ny vola azo, izay eo anelanelan’ny 43 736 sy 5 027 euros. Hiara-kiasa amin’ny federasiona tsirairay avy ny Rugby Afrque ho amin’ny fankatoavana, mialoha ny hamoahana ny vola. Tsy maintsy mandinika ny lafy tsarany rehetra amin’ny fampiasana ny vola ireo federasiona 11 handray izany ka hifototra tsara amin’ny fampandrosoana haingana sy ny fanatsarana ny kalitaon’ny fifaninanana, hahazoana manana ekipam-pirenena tsara. Tsy hisy intsony koa ny olana momba ny vola ho an’ny federasiona, eo amin’ny fanomanana ny ekipany.“Raha tsy nisy ny fanohanana toy izao, mety hanano sarotra ny fanombohana ny taom-pilalaovana, ho an’ny federasiona isanisany. Niaraha-nahita mantsy fa tena niaina vanim-potoana sarotra tsy mbola nisy toy ity ny rehetra tamin’ity taona 2020 ity, noho ilay areti-mandringana Covid-19”, hoy i Andrew Owor, filoha lefitry ny Rugby Afrique. Marihina fa tsy mitovy amin’ilay tahirim-bola iombonana ho famonjena, nitentina 117 000 euros, ho an’ireo federasiona 31 ity, izay namonjena ireo marefo tamin’ny alalan’ny fanomezana sakafo sy famatsiana fitaovana ara-pahasalamana. Tompondaka L’article Rugby aty Afrika: federasiona 11 hahazo vola 276 490 euros a été récupéré chez Newsmada.
Tetikasa Fandroso: 20,5 tapitrisa euros hampandrosoana ny tantsaha
Natao sonia, ny 9 jolay teo, ny fifanarahana eo amin’ny Vondrona eoropeanina (UE) sy ny Tahirimbola hampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (FDA) ao anatin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), hanatanterahana ny Tetikasa Fandroso. Mitentina 20 526 315 euros ny famatsiam-bola ka avy amin’ny UE ny 19 500 000 euros, ary avy amin’ny fanjakana malagasy ny 1 026 315 euros. Hoentina hanohanana ny fampandrosoana ny Vondrona tantsaha mpamokatra ny Tetikasa Fandroso, hanamorana ny fahazoan’izy ireo ny tolotra amin’ny famokarana, sy hanavaozana rahateo ny fomba famokarana. Voakasik’izany ny faritra 22 eto amintsika, ary haharitra 36 volana ny tetikasa.Nilaza ny masoivohon’ny UE eto Madagasikara, i Giovani Di Girolamo, fa antenaina hitondra fampandrosoana lehibe eny ambanivohitra ity tetikasa ity. Hanampy betsaka ny tantsaha mpamokatra ihany koa, indrindra ny tokantrano marefo, manoloana ny krizy ateraky ny Covid-19.Zanaka tetikasa miisa 4 000Ho an’ny minisitra Maep, Ranarivelo Lucien, ilaina tokoa ny fanohanan’ny Vondrona iraisam-pirenena amin’izao krizy ara-pahasalamana izao. Nandray ny fepetra rehetra hanampiana ny lafiny sosialy sy ny famokarana i Madagasikara, toy ireo firenena afrikanina hafa, hoentina hampandrosoana ny toekarena.Manodidina ny 4 000 ny zanaka tetikasa hotohanan’ny Tetikasa Fandroso. Miisa 250 000 ny mpamokatra hahazo tombontsoa. Hisy ivontoerana Tahirimbola hampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana (FDA) vaovao hosokafana any amin’ny faritra enina (i Bongolava, i Betsiboka, i Boeny, i Diana, i Sava ary i Sofia).Marihina fa ao anatin’ny Fandaharanasa Rindra ny tetikasa Fandroso, hampiakarana ny vokatra sy ny fidirambolan’ny tantsaha misehatra amin’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono.Njaka AndriantefiarinesyL’article Tetikasa Fandroso: 20,5 tapitrisa euros hampandrosoana ny tantsaha a été récupéré chez Newsmada.
Ady tamin’ny covid-19 :: Lehilahy mizara ny fisedran’ izy mianakavy ny valanaretina
Efa saika namoy fo mihitsy Rasoambolanirina Anicet Lala, raim-pianakaviana 36 taona, voamarina fa nitondra ny tsimok’aretin’ ny Covid-19, nandritra ny roa herinandro, talohan’ny naha avotra ny ainy tamin’ny andro farany. Mijoro vavolombelona amin’ny firesahana ny fahombiazan’ny fitsaboana tao anatin’ny fisedrana an’ity valanaretina mahery vaika ity izy, ankehitriny, satria mizotra mankany amin’ny fiverenan’ny fahasalamany tanteraka ny lehilahy. « Mafy sady efa imbetsaka no hitako ho nivoha nidanadana ho ahy ny varavaram-pasana. Tsy matory aho ary miasa saina mafy teo am-pitondrana ny tsimok’aretin’ny Covid-19 », hoy ny fitantaran’ity raimpianakaviana ity. Tamin’ny 6 jolay 2020 izy no nanomboka sempotra. Nanatona dokotera tsy miankina ary nitsabo tena tao an-tranony, teny Itaosy. Efa natsindrona taminy avokoa ireo karazampanafody mitsabo ny tratra sy miaro amin’ny fahasemporana, saingy tsy nisy nandaitra. Nampidirana seraoma nandritra ny dimy andro i Anicet, tao anatin’izany fitsaboan-tena izany, ary mbola nampiana roa andro aza, avy eo. « Tsy niova ny toe-pahasalamako. Mbola sempotra ihany aho. Niteny tamiko ny mpitsabo hoe tsy misy azo atao intsony fa mandehàna eny amin’ny « Village voara » eny Andohatapenaka », hoy ilay raimpianakaviana. Antso fanairana Notilina ary nomena tambavy Covid-organics izy, taorian’izay. Teo vao nihatsara ny fahasalamany satria nanomboka afaka ny fahasemporana. « Nahasitrana ahy io tambavy io, na dia maro aza no nisakana ahy tsy hampiasa azy », hoy indray izy. Valo mianaka no antonkantranon’ i Anicet, eny Itaosy. Izy sy ny reniny ihany no natao fitiliana ka niabo avokoa ny valin’izany. Manomboka marary ireo olona enina hafa ao anatin’ny fianakaviany, amin’izao fotoana izao. « Fanafody fampidinana hafanana sy fampitomboana hery fiarovana ihany no maimaim-poana eny amin’ ny tobim-pahasalamana fototra (Csb2). Tsy misy eny na ny tambavy Covid-organics aza fa vidiana avokoa ireo fanafody ambiny rehetra tokony hampiasaina. Izahay izao dia misotro CVO daholo ary mamoaka vola ampaosy mividy an’izany », araka ny fanamarihan’i Anicet. Io antony farany no nanaovany antso avo amin’ ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny fomba mahomby hanampiana an’ireo mararin’ity valanaretina manoloana ny fandaniana ara-bola isampianakaviana. « Tiako ho tonga any amin’ny Filohan’ny Repoblika izao antsoko izao. Ahoana ny fitsaboana sy ny famonjena ny ain’ireo olona tsy manana na ariary aza ao an-tranony kanefa tsy maintsy mividy fanafody. Fahafatesana no miandry azy ka tokony mba hatao laharam-pahamehana ny momba an’ireo olona marefo ara-pivelomana kanefa mitondra ny tsimok’aretina », hoy ihany i Anicet. L’article Ady tamin’ny covid-19 :: Lehilahy mizara ny fisedran’ izy mianakavy ny valanaretina est apparu en premier sur AoRaha.
Mirongatra ny asan-jiolahy: sinoa mpandraharaha iray notafihin’ny jiolahy, lasa ny 20 tapitrisa Ar
Na eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana, tsapa ho mirongatra andro aman’alina ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana ao Toamasina. Vao afakomaly, sinoa mpandraharaha iray indray no lasibatra sy voaroba volabe hatramin’ny 20 tapitrisa Ar.Io indray koa! Tohivakana ny fanafihan-jiolahy ao Toamasina ary saika isan’andro, indrindra mandritra ny tsy fahafahana mivezivezy amin’ny alina. Mipetraka ao Ankirihiry, parisela 11/52 ,laharan-trano faha-40, ity Sinoa niharan’ny fanafihana ity ary andian-jiolahy eo amin’ny 10 eo ho eo ny tompon’antoka tamin’izany tamin’io misasakalina io, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany ao Tanambao, ny kaomisera Rakotovao Christian. Dimy lahy amin’ireo jiolahy no niditra an-keriny tao an-tokantranon’ilay mpandraharaha sady nandrahona tamin’ny basy. Raha vantany vao tafiditra tao an-trano ry zalahy, ny telefaonina finday avolenta roa no nalain’izy ireo. Mbola nofatoran’izy ireo koa ny mpiambina. Ny sasany kosa, niandry teny ivelany sady nanara-maso ny manodidina.Nanao tifi-danitra intelo ireo jiolahy…Niezaka nikaroka zavatra sarobidy samihafa tao an-trano izy ireo ka nahita lelavola 20 tapitrisa Ar sy firavaka volamena, entana lafo vidy toy ny fahitalavitra, fitaovana elektronika, radio tao anatin’ny fiara tao amin’ny garazy. Nopotehiny kosa ireo tsy zakan’izy ireo. Nanao tifi-danitra intelo kosa ry zalahy rehefa nitsoaka. Afaka avy hatrany niantso polisy ihany anefa ilay niharam-boina taorian’izany ka tonga teny an-toerana ireo polisy. Hatreto, tsy mbola nisy voasambotra ireo jiolahy, saingy efa misy kosa ny loharanom-baovao voarain’ny polisy mahakasika ireto jiolahy ireto.Raim-pianakaviana avy naka fisotroan-dronona voatafika…Fa ny alatsinainy tolakandro teo ihany koa teo amin’ny araben’ny Fahaleovantena ao Toamasina, raim-pianakaviana iray avy naka vola fisotroan-dronono no nisy nandrahona tamin’ny basy ka naka an-keriny ny vola rehetra tany aminy. Jiolahy nanao taingin-droa tamin’ny moto ny nanafika azy. Nambaran’ny polisy fa mitovy tsy misy valaka amin’ilay fandrobana raim-pianakaviana iray tao Morafeno, tapa-bolana lasa, ity fanafihana ity. Mirongatra izaitsizy, araka izany, ny fanafihan-jiolahy ao Toamasina ary tsikaritra fa tena mitaintaina sy mandry an-driran’antsy hatrany ny mponina manoloana izany na eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny fanenjehana azy ireo. Misy ny efa tratra, saingy misy hatrany ireo mbola miriaria eny anivon’ny fiarahamonina eny.Sajo sy Jean ClaudeL’article Mirongatra ny asan-jiolahy: sinoa mpandraharaha iray notafihin’ny jiolahy, lasa ny 20 tapitrisa Ar a été récupéré chez Newsmada.
Toetr’andro: mbola mitohy ny ora-mikija any avaratra sy andrefana
Mbola mikija ny orana hatrany Avaratra sy andrefan’ny Nosy ateraky ny andian-drahona miaraka amin’ilay rivodoza Eloise. Mitohy ny fiakaran’ny rano amin’ireo faritra ireo ka mila mailo ny mponina.53%-n’ny rotsak’orana tokony hilatsaka tamin’ity volana janoary ity no nilatsaka tao anatin’ny iray andro tao Antalaha raha ny fandrefesan’ny mpamantatra ny toetr’andro. Efa manodidina ny 139 mm izany rotsak’orana izany ary mihoatra be amin’ny tokony ho izy.Torak’izany ny oram-be mihoa-pampana ao Nosy Be izay manodidina ny 31% amin’ny tokony hirotsaka amin’ity volana ity. Miakatra ny renirano, mila mailo amin’ny fihotsahan’ny tany.Efa nihena be ny heriny. 50 km isan’ora ny rivotra entiny izay mifandray amin’ny tsioky ny talio mihamatanjaka amin’ny tapany avaratra-andrefana.Nivoaka an-dranomasina io maraina io izy.Mbola mitoetra ny filazana miendrika fahamailoana miloko manga ho an’ny faritra sy distrikan’i Sava, Analanjirofo, Bealanana, Befandriana Avaratra ary Mandritsara.Hanatombo ny rotsak’orana amin’ny tapany avaratra-andrefan’ny Nosy.Ny mpampiasa ranomasina amin’ny morontsiraka avaratr’i Toamasina, eo anelanelan’ny Cap d’Ambre sy Morombe dia entanina tsy hiandriaka satria mikorontana ny toetr’andro, oram-baratra sy mandrivotra.Amin’ny alatsinainy vao hiverina ny oranaHo an’Antananarivo, nilaza ny mpamantatra ny toetr’andro fa amin’ny alatsinainy any indray vao hisitraka orana ny eto afovoan-tany. Hisy ny orana tandrifindrahona kosa amin’ny toerana sasantsasany arakaraky ny fitsitokotokoan’ny rahona. Manodidina ny 19°C ka hatramin’ny 26°C ny maripana. Ho an’i Toliara, hanodidina ny 27 ka hatramin’ny 34°C kosa ny maripana. Tatiana AL’article Toetr’andro: mbola mitohy ny ora-mikija any avaratra sy andrefana a été récupéré chez Newsmada.
CFM momba ny kere : “Misy olom-boafidy manodina fanampiana”
“Tsy menatra aho miteny an’ity ary misy porofo: ny tena loza, manao ihany ny fitondrana foibe. Misy olona sasantsasany sy olom-boafidy sasantsasany miray tsikombakomba amin’ireo mpizara sakafo. Ny zavatra ataon’izy ireo: manodinkodina ny fanampiana ho an’ireo kere.” Io ny fanambaran’ny filohan’ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, momba ny fizarana sakafo fanampiana ho an’ireo tratran’ny kere any amin’ny faritra atsimon’i Nosy, amin’izao fotoana izao.Misy loahina na tatahin-dry zareo ny gonim-bary ary afindra amin’ny gony hafa ny vary.Misy mpandraharaha miray tsikombakomba amin’ireo olom-boafidy sy mpizara fanampiana amin’izany ary mivarotra ny vary avy eo.Ny mahagaga, ireo tomponandraiki-panjakana rehetra, manomboka any amin’ny lehiben’ny fokontany, ireo olom-boafidy isaky ny distrika, ireo mpiara-miombon’antoka: tsy tokony hafenina ny zavatra toy izany, fa tokony holazaina. Mba hahazoan’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny mpitondra fanjakana foibe hitondra ny fanampianaRobain’ny dahalo ny fanampiana“Mihamafy ny kere”, hoy izy. Ny tena mampalahelo toy ny nitranga tao Antranomaro andro vitsivitsy lasa izay, ohatra: misy fizarana sakafo; rehefa mody ireo olona manodidina, tafihin’ny dahalo indray ary ravany ny sakafo azo. Misy tranga dimy na efatra ny toy izany.Izay no tena mampalahelo dia mampalahelo ny amin’io fizarana sakafo ho an’ny kere any atsimo io. Manga manta andrahoina na voamadilo afangaro lavenona no sakafon’ireo mponina any an-toerana.Aiza ho aiza ny tomponandraiki-panjakana isan-tsehatra sy isan’ambaratonga amin’izany? Mba tsy hisy ny faritra lavitra fanjakana, na mponina zanak’Ikalahafa.R.Nd.L’article CFM momba ny kere : “Misy olom-boafidy manodina fanampiana” a été récupéré chez Newsmada.